तिथि मेरो पत्रु » खाद्य हरेक विद्यार्थी सम्बन्ध राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ?
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: Dec. 03 2020 |2मिनेट पढ्न
सार्वजनिक विद्यालय विज्ञानको कक्षामा फिर्ता Rewind, तपाईं जीवनको आधारभूत आवश्यकताहरु सिकेका गर्दा.
हाम्रो टाउको हामीले मानव जगतले हावा को एक निरंतर आपूर्ति आवश्यकता कसरी ज्ञान भरिएका थिए, पानी र खाना बाँच्न. पक्का, हावा र पानी महत्त्वपूर्ण छन्, तर मेरो प्रकारको थुप्रै एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता साँच्चै छ कि बाहिर खडा खाना. यो म एक हुँ भनेर हुन सक्छ 18 कहिलेकाहीं खाने रूपमा आफ्नो मुख्य आवेग को भन्ठान्ने वर्षीय पुरुष, तर विद्यार्थी संसारमा खाना विशाल शक्ति धारण.
अझै पैसा भङ्ग खाद्य पूरा हामीलाई धनी बनाउँछ, खाना सँगै मित्रहरुलाई ल्याउँछ, खाना दैनिक उत्सव लागि कारण छ र राम्रो कुनै पनि विद्यार्थी सम्बन्ध बनाउन सक्छ.
मलाई व्याख्या गरौं ...
म एक प्रसिद्ध इतिहासकार होइन तर म यकीन छु भनेर समय को सुरुदेखि, सम्बन्ध उकसाया गरिएको छ र खानेकुरा को फस्टाए छन्.
पदार्थों र cavewomen पोलेर गिलहरी र पागल को राम्रो चन्द्र-जलाई रात्रिभोज मा बंधुआ. यस वाइकिंग युग हार्दिक चाडहरूमा समयमा साझा भइरहेको प्रेमीहरूको बीच गुणस्तरीय समय पाइन्थ्यो. आज, पनि शायद खाना को कुनै प्रकारको समावेश हुनेछ कफी मिति लागि बाहिर जाने. तपाईं अंक प्राप्त.
विद्यार्थीलाई संसारमा, खाना अझै पनि सम्बन्ध मा प्रयत्न प्रतिष्ठा को यो स्थिति धारण.
पिज्जा सबै समय को सबै भन्दा बहुमुखी र प्रभावशाली सम्बन्ध निर्माता प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ. कहिल्यै एक केटी एक राम्रो पिज्जा मिति कुनै भन्नेछन् (यो एक nicer fella संग छ विशेष गरी भने). मा आदेश वा पिज्जा ठाउँ कुनै पनि सम्बन्ध फल फलाउन बनाउन हुनेछ शहर एक राम्रो टहलने लागि जाँदै जस्तै सरल इशाराहरू.
सबै बस यति भोजन संग धेरै सजिलो भयो गर्नुपर्छ.
यो आफ्नो पहिलो मिति वा बीसौं मिति होस्, यो तपाईं र तपाईंको साथी दुवै आनन्द उठाइरहेको खाना समावेश त कुराकानी राम्रो प्रवाह हुनेछ, मुस्कान उज्जवल हुनेछ, आनन्द अधिक पूर्ण र आफ्नो जडान फलिफाप हुनेछ सम्भावना बढी आफ्नो पेट.
तिमी एक काम स्टोभ संग एक घर बस्नुहुन्छ भने, चुलो, टोस्टर, माइक्रोवेभ वा ताप दीपक त तपाईं पनि यस सम्बन्ध सुदृढ मा भाग लिन सक्छन्. खाना सँगै खाना पकाउँदै गरेर, वा आफ्नो महत्वपूर्ण अन्य लागि एक राम्रो प्रसार तयार पालैपालो लिएर एक मजा समय हुन र सँगै करीब ल्याउनेछ (पनि आफ्नो पाक कला कौशल कुनै अर्को हो भने ... केडी अझै पनि खाना छ).
यो निवास जीवन दिन्छ. खाना योजना छ सबै जो छात्र बुझ्न गर्नेछ भन्ने सुन्दर कुरा त्यहाँ छ. प्लास्टिक को एक सरल आयत संग, एक एक धेरै सानो खर्च जस्तै महसुस के को लागि खाना को विशाल मात्रा प्राप्त गर्न सक्छन्. स्वाइप, खान, र यो सजिलै रोमान्टिक पक्ष समावेश गर्न सक्छन् भने. सबैभन्दा भोजन योजना पनि सबै परिसर मा र केहि शहर रेस्टुरेन्ट मा प्रयोग गर्न सकिन्छ. यो लागि तिर्न र मिति जान जीविका र त्यसैले एक सरल तरिका गर्न सजिलो पहुँच सिर्जना.
उच्च शिक्षा को दुनिया मा, पोषण सजिलो कुनै पनि विद्यार्थी सम्बन्ध बनाउन सक्छ, राम्रो, र बस भनेर धेरै भयानक. तिनीहरूले प्रेम कारण आवश्यकता छैन भन्न ... तर यो निश्चित खाना आवश्यकता.